Sakana tsara indrindra ho an'ny alika - Izay rehetra tokony ho fantatrao! | Tontolo alika
Ny sakana ho an'ny alika dia iray amin'ireo singa fiarovana araka ny tokony ilaintsika. Tsy ho an'ny tenany ihany fa ho antsika sy ny tranontsika koa. Famenon-daza fanta-daza izy ity, saingy anio dia hahalala bebe kokoa momba azy ireo ianao, satria na dia toa izany aza dia tsy fantatrao daholo ny momba an'io singa io.
Miaraka amin'ny sakana alika afaka mamorona toerana voafetra ao an-tranonao ianao, amin'izay tsy afaka mandalo ny biby fiompinao isaky ny maniry izany. Satria ny sasany mety hiteraka fahavoazana sasany ary tsy mila izany isika indrindra rehefa tsy ao an-trano isika. Noho izany, a priori, lasa sakana ny sakana. Aza adino izay manaraka rehetra!
Iris Ohyama, vavahadin'ny ...
Fiarovana fiara voalohany fanakatonana...
Sakura SS5259 - Barrier ...
Trixie sakana azo itarina...
1 Fa maninona no mividy sakana alika?
2 Karazana sakana alika
2.2 Ny vy
2.3 Avy amin'ny hazo
2.4 Tsy misy visy
3 Ahoana ny fomba hisafidianana sakana alika tsara
4 Mendrika mividy sakana alika ve ianao?
5 Aiza no hividianana sakana alika mora vidy
Fa maninona no mividy sakana alika?
Avadiho ho efitranonao ny efitrano iray ao an-trano: Iray amin'ireo hevitra tsara azonao atao ny misaotra sakana alika dia ity. Alao an-tsaina hoe manana efitrano kely ianao nefa tsy azonao antoka izay azonao atao amin'izany. Ny fananana biby dia mety efa mitsambikina ny hevitra nefa tsy afaka misoroka izany. Amin'izay mba azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny famerana ny efitrano nolazaina, hizara azy ho faritra na, apetraka amin'ny faran'ny varavarana ary mamela toerana bebe kokoa ho an'ny biby fiompinay. Satria indraindray tsy voatery ho efitrano io fa faritra iray izay tsy tena ampiasantsika na araraotintsika.
Sakano izy ireo tsy hiditra amin'ny faritra ao an-trano: Ny iray amin'ireo asa tena ilaina ananan'ireo sakana dia ity. Satria raha avelantsika izy ireo, ny biby fiompy dia hiditra sy hivoaka amin'ny efitrano samihafa mandritra ny andro. Tian'izy ireo ny mamantatra izay ao amin'izy ireo tsirairay avy. Noho izany, zava-dehibe raha tianao sakano izy ireo tsy hirenireny manodidina ny trano, apetraho ireo sakana amin'ireo fidirana na faritra voarara ho azy ireo. Ka manakana ny lalany ary tsy misy azo atao hanarenana azy.
Sakano izy ireo tsy hiakatra sy hidina amin'ny tohatra: Rehefa misy tohatra eo afovoan'ny trano dia mila mitandrina tsara foana isika. Satria raha ataontsika amin'ny ankizy izany, amin'ny biby fiompy koa. Amin'ity tranga ity satria lny olana ara-pahasalamana dia mety ny filaharan'ny andro ary tsy mila hijaly izahay. Noho izany, hisorohana ny fakam-panahy dia tsara kokoa hatrany ny misoroka an'izany amin'ny fomba toy izany ary miaraka amin'ny sakana ho an'ny alika.
Sakano izy ireo tsy hivoaka any ivelany: Indrindra ny alikakely dia ny tsy mampandry saina indrindra ary marina fa indraindray isika tsy afaka mifehy azy ireo araka ny itiavantsika azy. Noho izany, tsy maintsy mieritreritra fomba sasany ahafahana mifehy tsara azy ireo foana isika. Manakana ny tsy fitandremana tsy ho eo koa ny sakana ary noho izany, afaka mivoaka any ivelany izy ireo. Azontsika atao ny mitahiry azy ireo foana ary izany dia mahatonga antsika ho mora miaina ihany koa.
Karazana sakana alika
Izy io dia iray amin'ireo karazana ankafizin'ny maro satria araka ny anarany, dia azo atao midadasika na latsaka. Inona no milaza amintsika izany azo miraikitra amin'ny habaka samihafa ary zavatra tianay izany. Hifanaraka amin'ny sakan'ny varavarana samihafa izy io, arak'izany ilaintsika izany, ahafahany manao kely kokoa.
Fahalemana 1st Easy Close ...
Raha mieritreritra ny hametraka ny sakana alika any ivelany ianao, dia ny metaly no iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Tena mahatohitra izy ireo noho izany antony izany, hametrahana azy ireo any ivelany, fa tsy ho an'izany ihany fa ho an'ireo alika rehetra izay mikotroka. Satria amin'ny famaranana toy izao dia ho sarotra aminy izany. KOA mety amin'ny alika lehibe kokoa izy ionoho ny fanoherana efa noresahintsika.
Ny fisainana sakana hazo fotsiny dia fantatsika ny firavaka ny tranontsika dia hisaotra antsika. Satria ny hazo dia mety indrindra raha atambatra isaky ny zoron-trano. Ka io dia iray amin'ireo safidy kanto etsy ankilany fa azo ampiharina koa amin'ny lafiny iray. Satria hiaro ny biby fiompinao koa izy ireo. Na dia marina aza fa misafidy ny hikoroka na hanaikitra azy ny sasany.
Tsy misy visy
Manana ny safidy isan-karazany indrindra izahay mba hahafahantsika mankafy ny tombony tena tsara. Amin'ity tranga ity dia miresaka isika sakana tsy misy banga. Vahaolana tonga lafatra mba tsy hitrandrahana faritra ao an-trano. Ny tsara indrindra dia ny mitady hevitra toa izao izay tsy misy visy. Matetika izy ireo dia miaraka amina karazana kaopy suction sy farango sasany izay hanarahanao azy ireo. Ka hiezaka ny hametaka sy hanala rehefa mila izany ianao. Satria amin'izany fomba izany dia hanampy anao hanova toerana arakaraka ny filanao sy ny an'ny biby fiompinao.
Ahoana ny fomba hisafidianana sakana alika tsara
Fitaovana: Iray amin'ireo teboka lehibe tokony horaisina. Ny fitaovana dia hamaritra ny tanjaka sy ny faharetan'ny sakana alika, noho izany dia tsy maintsy misafidy tsara foana isika. Ny metaly dia iray amin'ireo hevitra tsara indrindra ho an'io fanoherana nolazainay io, mazava ho azy raha tianao ny handeha araka ny haingo anao, angamba ilay hazo no be mpanondro. Tsy maintsy mieritreritra tsara momba izay tadiavinao ianao na izay mety alohan'ny handraisanao ilay dingana.
hahavony: Anton-javatra manan-danja izay misy satria mila ny biby fiompinay ny toerana tokony hisy azy ireo ary voalohany, voalohany tsy maintsy mieritreritra ny haben'ny biby isika. Satria any no hamaritana ny haavon'ny sakana. Raha ny lojika dia somary avo kokoa izy ireo raha alika antonony na lehibe no resahina. Fa ho an'ny ankizy kely dia tsy mila izany haavony izany izy ireo satria tsy ho afa-mandositra.
sakany: Eto, mba hahitana hoe hatraiza ny sakana tokony hataon'ny alika eritrereto ny toerana hametrahantsika azy ireo. Satria indraindray izy ireo dia eo am-baravarana na eo amin'ny tohany ihany no manao fidirana, ka eo no tsy maintsy refesintsika ny sakany. Fa raha hanasaraka ny habaka izy, dia tadidio fa ho lehibe kokoa ny sakany. Noho izany dia tsy maintsy mandray tsara foana ireo fepetra isika mba tsy hananantsika ny tsy fahampian-tsika sy tsy hahavitana antsika.
Fixation System: Eto indray ny filanao dia mandeha indray. Satria afaka manana sakana alika izay misy visy azo amboarina tsara na amin'ny lafiny iray hafa, kaopy fisotrohana. Ka amin'ny tranga farany dia tsy mila mandavaka ny rindrina na ny varavarana intsony ianao. Na dia marina aza fa ny tena fahita dia ireo izay atsofoka, satria ny hafa dia matetika ho an'ny faritra toy ny tohatra.
Rafitra fanokafana fiarovana: Na dia raikitra aza ny sasany, ny hafa kosa manana rafitra fanokafana izay manana filaminana tanteraka. Mba hialana amin'izany dia afaka manokatra azy amin'ny fomba tsotra ny biby fiompy, na dia marina aza fa tsy hanohitra isika. Noho izany matetika ny roa tonta dia raikitra ary ny ampahany afovoany dia azo sokafana ary hakatona araka izay itiavany azy, rehefa ilainao izany.
Mendrika mividy sakana alika ve ianao?
Ny marina dia eny, sakana alika dia mendrika ny mividy foana fa eny, tsy maintsy hainao foana ny misafidy ny fanoherana lehibe mety hananan'izy ireo. Satria araka ny efa noresahintsika teo aloha, raha mifampiraharaha amin'ny alika lehibe isika dia hifidy safidy matanjaka sy lava na malalaka kokoa. Raha ny mifanohitra amin'izay no ho marina ho an'ny karazany kely kokoa. Na izany na tsy izany, ianao hanana toerana miavaka tsara ahafahanao milamina na milamina izay tsy hidiran'izy ireo. Satria inona no sakana alika azo itokisana kokoa noho ny fomba fisarahana hafa.
Aiza no hividianana sakana alika mora vidy
kiwiko: Kiwoko koa dia manana andiana sakana amin'ny alika izay tsy tokony halainao. Satria izy ireo dia vita amin'ny fitaovana mahatohitra izay, miaraka amin'izay dia miraikitra amin'ny rindrina ary azo zahana. Raha tsy hiteny an'izany koa manana maodely tsy mila ampidirina amin'ny rindrina ianao.
Amazon: Ahoana no tsy dia kely kokoa, amin'ny Amazon ianao dia afaka mahita sakana tsy misy farany ho an'ny alika. Satria amin'izay ianao vao afaka mankafy ireo famaranana izay tianao sy eritreretinao momba ny filan'ny biby fiompinao. Ny hazo na vy misy habe samihafa dia ho safidy sasany ho hitanao amin'ny Internet hatrany.
Leroy Merlin: Ao amin'ny Leroy Merlin dia afaka manana safidy maromaro amin'ny endrika sakana ho an'ny alika koa ianao. Satria izy ireo no manana ny famaranana mahatohitra indrindra ary mazava ho azy, adaptatera ka afaka mifanaraka amin'ny habakao foana izy ireo. Manomboka amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ireo afaka mampifanaraka na miovaova.
Matetika: Iray amin'ireo magazay hafa tsy azo avela any aoriana. Izy ireo koa dia ao anatin'ny fisafidianana lehibe amin'ny resaka sakana midika izany. Lavorary apetraka amin'ny fidirana amin'ny tohatra na amin'ny varavarana. Mba tsy ho afa-mandositra na simba isika. Izao dia mila misafidy izay mety indrindra aminao fotsiny ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Sakana ho an'ny alika